Revisió de GoDaddy
Ny orinasa dia manome tetikasa fampiantranoana no orinasa madinika, ny manam-pahaizana manokana momia ny Internet, ary ny olon-tsotra ary manana birao any amin’ireo faritra tena tsara indrindra eran-tany, anisan’izany ny Silicon Valley, Cambridge, Seattle, Seattle Hyderabad, Belfast, ary Phoenix.
Na dia tsy mahafantatra ny indostrian’ny fandraisam-peo / fandraisam-bahiny aza ianao, dia azo inoana fa naheno an’i GoDaddy tamin’ny alàlan’ny dokambarotra Super Bowl na NASCAR.
Mahaliana fa GoDaddy dia manohana ihany koa ny antony manohana ireo antony marobe – qualsevol Phoenix, no qualsevol GoDaddy manana trano 270.000-metra toradroa, o no orinasa dia nanao fanomezana ser dia be ho an’ny Hopitaly Ankizy Phoenix, no Arizona Humane Society, ary ny Zoo de Fènix.
Ny IPO GoDaddy dia nanangana vola 460 $ tapitrisa tamin’ny abril 2015.
Tamin’ny Jona 2014, GoDaddy Inc. dia nanangona no IPO Tamin’ny 2014 tamin’ny volana Jona miaraka amin’ny sandan’ny $ 100 tapitrisa eo amin’ny fifanarahana. Ny orinasa amin’ny farany dia nanangana 460 dòlars $ tapitrisa avy ao amin’ny IPO el 1er 2015 de la tarda volaminada Aprily.
2 Plans d’allotjament GoDaddy
3 GoDaddy vs Sampana hafa an’ny Hosting hafa
4 Revisió d’usuari de GoDaddy Hosting
4.1 Joguet ha estat Koa ny GoDaddy Mampiantrano zavatra tsara?
4.2 Inona no toy tyy amin’ny GoDaddy Hosting?
4.3 La misimisy kokoa momba i la foto s’ajusta a GoDaddy & ny hadisoana mpizara
5 Revisió de temps de GoDaddy
6 Bottomline: Tokony hiaraka amin’i GoDaddy ve ianao?
6.2 Zava-dehibe: Ny fanamarihan’ny mpamoaka lahatsoratra ao amin’ny Saurabh’s GoDaddy Review
Raha mijery ny GoDaddy ianao Ny 2014 sivy volana dia namarana ny valiny ara-bola tsy nekena, afaka mahita ianao fa mifantoka amin’ny orinasa telo ny orinasa:
Dominis: el 55,5% del mig
Fanomezana sy fananana – 36,5% sense vol miditra
Fampiasana ny Business – 8,0% més de mig any manontolo
Ny orinasa dia nanao 1,01 $ miliara amin’ny fidiram-bola (araka ny vokatra ara-bola) fa mbola very vola (ny orinasa dia nahatonga ny famoahana ny vola $ 200 tapitrisa amin’ny taona ara-bola 2013).
Ny ampahany goavana amin’ny fidiran’i GoDaddy dia ny fisoratana anarana anarana momba ny anarana sy anarana fanavaozana anarana.
Nandritra ny sivy volana voalohany tamin’ny 2014, ny sokajin’ny sampan-draharaha dia nahazoana vola mitentina $ 564 $ tapitrisa.
Ny fidiran’ny GoDaddy avy amin’ny fisoratana anarana dia mety miovaova be. Ny orinasa dia dominis miampanga ny vidiny isan-karazany amin’ny karazana dominis. Ohatra, foto foto nanoratana, fisoratana anarana vaovao dia 8,99 $ / taona ho an’ny fe-potoana 2 taona. Ny mahaliana, ny tolotra sy ny .org sy ny orona dia mitovitovy aminy, raha izao. Ankehitriny dia mitentina 24,99 $ / taona.
Fananana si Fanatrehana
Ny ampahany goavana faharoa amin’ny fidiran’i GoDaddy dia ny azon’izy ireo avy amin’ny fanomezana karazana fampiantranoana si fanatanjahan-tena.
Ny fizarana ny Hosting and Presence at GoDaddy dia nitentina teo amin’ny 370 $ tapitrisa nandritra ny sivy volana tamin’ny 2014.
Ny vola miditra avy amin’ny fizarana "Hosting i Presència" dia ahitana no vokatra fananganana tranokala, SEO, SSL mari-pankasitrahana, fiarovana ni tranokalan’ny SiteLock, IPs manokana ary mihoatra. Raha ny resaka fampiantranoana, GoDaddy dia manolotra, VPS ary serikan’ireo mpanjifanao manokana amin’ny taham-bola hatramin’ny dolara dolara isam-bolana dominis isaky no. Ankoatr’izany, no fampiantranoana dia ahitana fitaovana fananganana tranokala mba hahafahan’ireo mpanjifany manamboatra ny tranokala haingana sy haingana.
Aplicacions empresarials no ampahan’ny an’ny GoDaddy diumenge vola mitentina manodidina a 81 USD 6,6 tapitrisa amin’ny sivy volana amin’ny 2014.
Ny "Aplicacions empresarials" An’ny GoDaddy dia misy ireo zavatra joguina ny kaonty mailaka, no fivarotana an-tserasera, no fitahirizana angon-drakitra en internet, no comercialitza mailaka ary ny rafitra fandoavam-bola an-tserasera.
Ny sasany amin’ireo vokatra manokana entina amin’ny Aplicacions empresarials dia:
Microsoft Office 365, a la vegada, s’aconsegueix una inversió de 4,99 dòlars / volà no és possible
Adiresy mailaka an-tserasera, izay manomboka amin’ny vidin’ny $ 9,99 / volana ho an’ny mpanjifa 1.000. Izy io dia manana fahaizana mitovy amin’ny MailChimp sy GetResponse.
Plans d’allotjament GoDaddy
Eny ary, no lafin’ny orinasa sy ny isa ara-bola ampy. Amin’ity famerenana ity dia hifantoka amin’ny serivisy fampiantranoana GoDaddy izahay. Manolotra drafitra fampiantranoana telo samy hafa ny orinasa sy ny orinasa:
Toe-karena: 4,99 dòlars isam-bolana ho an’ny tranonkalan’ny 1, 100 GB, fitaterana tsy voafetra, ary adiresy imailaka 100.
De luxe: 5,99 dòlars isam-bolana ho an’ny tranonkala tsy voafetra, fitehirizana tsy voafetra, ample de banda tsy voafetra ary hatramin’ny adiresy mailaka 500.
Definitiva: 7,99 dòlars isam-bolana ho an’ny tranonkala tsy voafetra, fitehirizana tsy voafetra, ample de banda tsy voafetra ary hatramin’ny adiresy mailaka 1,000.
Ataovy ao an-tsaina fa rehefa mandamina tècnica no fandrosoana tsy fetyy misy, ary ny drafitra Deluxe sy Fampiantranoana final dia manao dokam-barotra tsy misy fetra, tsy voafetra ara-tècnica. GoDaddy dia mitazona ny zo hampandre no mpampiasa raha mampiasa no fitahirizana fitahirizana ni bandwidth hampihena ny fahamendrehan’ny servera GoDaddy na misy fiantraikany amin’ny fotoana mety. Amin’ity tranga ity, ny mpampiasa dia takiana amin’ny fanavaozana amin’ny Serveix privat Privat a ny Serveur Dedicat privat.
Plans d’allotjament GoDaddy: Toe-karena, Deluxe, ary Ultimate. Sary nalaina tao amin’ny tranonkala GoDaddy http://www.godaddy.com, azafady manondro ireo tompon’andraikitra mba hahazoana marim-pototra indrindra amin’ny vidiny & fampiantranoana fampiasa.
GoDaddy vs Sampana hafa an’ny Hosting hafa
Mianara mitsitsy Toe-karena Tena ilaina starterDouble MegaMax Ràpid kilalaon’afo
Emmagatzematge 100 GB manam-petra 100 GB manam-petra manam-petra manam-petra
SSD? No No Eny No Eny No
Transferència de dades manam-petra manam-petra manam-petra manam-petra manam-petra manam-petra
Domini Nomena 1 manam-petra 1 manam-petra manam-petra 1
Takelaka fikirakirana cPanel vDeck cPanel cPanel cPanel cPanel
Període Període 45 andro amin’ny fotoana rehetra amin’ny fotoana rehetra 30 andro 30 andro 90 andro
Famoahana ny sarany (famandrihana 24-mesos) 3,99 dòlars / mes 2,25 dòlars / mes 3,95 dòlars / mes 2,45 dòlars / mes 4,90 dòlars / mes 3,74 dòlars / mes
Revisió Revisió Revisió Revisió Revisió
Revisió d’usuari de GoDaddy Hosting
Joguet ha estat Koa ny GoDaddy Mampiantrano zavatra tsara?
Ho valin’ny fanontaniana ara-bola – "Moa ve alefan’ny GoDaddy Hosting?" Dia nanontany ireo mpampiasa GoDaddy mpampiantrano, Saurabh Tripathi avy amin’ny Miezaha mitsiky, hizo my traikefany. Saurabh dia mpividy GoDaddy nanomboka ny volana 2014. Ireo sokajy manaraka (ao anatin ‘no fiheveran-tena sy ny tsipika, ary ny tsipika ambany, tsy voatosika, no fanamarihako amin’ny teny italian) dia nosoratan’i Saurabh.
No et misy an’i Saurabh.
Voalohany, tantaram-piainana kely
Nanao sonia no drafitra mora indrindra amin’ny GoDaddy aho. Miankina amin’ny $ 3 izany – ao vola anatin’izany no ha estat ahazoanao 512 MB RAM amb l’ample de banda tsy misy fetra, mitovy amin’ny fampiantranoana hafa. Misy fahasamihafana goavana: Tsy toy ny tolotra hafa fampiantranoana, izay manolotra tahirin-tserasera tsy fety misy, dia hahazo 30GB fitehirizana. Nampanantenaina Koa ianao 99,9%.
Inona no toy tyy amin’ny GoDaddy Hosting?
Hevitra Lehibe no és WordPress: Tsy nisy ny caching navela, fahadisoana tsy mety
Errors aleatoris: Nahita "Fahadiso no fametrahana ni fampifandraisan-davitra" 3 tao anatin’ny roa volana farany, na dia tsy mora aza ny nanamboatra azy io fa mbola tena manahiran-tsaina mihitsy.
Rehetra GoDaddy dia mivarotra ny toe-tsaina: Isaky ny manandrana manavao no anaran’ny fandraisam-bahiny na ny anaran-tserasera ianao dia miezaka mafy i GoDaddy hivarotra amina fanohanana fanampiny. Rehefa tsindrio "Renova Hosting", dia ho hitanao misimisy kokoa, manandrama hivarotra anarana nomena anao sy e-mail hosting etc.
La misimisy kokoa momba i la foto s’ajusta a GoDaddy & ny hadisoana mpizara
Toa tsara ny zava-drehetra amin’ny voalohany [rehefa nosoratako voalohany tao GoDaddy]. Ny fampiasana fahatsiarovan-tenan’ny WordPress amin’ny fampiantranoana kely kokoa noho MBX 150, ny Speed ​​dia tsy haingana fa tsy azonao atao koa ny milaza azy ho mora. Mampiasa ny Jetpack Actualitzacions per correu electrònic aho hararaha-maso famy Internet. Manara-maso ny tranonkala tsy tapaka ary mandefa mailaka mailaka rehefa miala ny tranokala. Roa na in-telo isan-kerinandro aho no mahazo mailaka fa ny tranonkala dia midina, ary matetika dia ao anatin’ny 10 minitra. Ny fotoana maharitra indrindra hitako dia ny 39 minuts. Mampalahelo eray.
Tao anatin’ny 3 volana lasa izay dia nahita ny "Connexió de bases de dades de Faharesena Connection" tamin’ny andron’ny 4. Ireo fahadisoana ireo dia manjavozavo amin’ny natiora ary azoko antoka fa tsy misy zavatra tsy mety amin’ny WordPress. Na izany aza dia mora ny mametraka ireo olana ireo. Necessiteu un dia addicional per a la seva implantació de plugins per a l’ampietat de l’ampia i l’ampasa. Taorian’ny nametrahana ny WPSuper Cache dia nipoaka ilay tranokala ary nahavita ezaka maro aho hamahana izany. Indraindray aho dia nihaona tamin’ny Error 520 ihany koa, ary diso ireo fahadisoana ireo.
Revisió de temps de GoDaddy
GoDaddy juny / juliol de 2016: Horari de l’amfitrió: 99,97%
Bottomline: Tokony hiaraka amin’i GoDaddy ve ianao?
Izany dia miankina amin’ny zavatra roa. Ny voalohany dia: moa ve ianao mampiasa WordPress? Ny zavatra hafa dia ny teti-bola.
Ny fametrahana famatsiam-bola ao amin’ny GoDaddy dia tsara ho an’ny olona izay te-hahita vohikala kely ary te-haneho fotsiny ny fanatrehany an-tserasera (juguet ny tranokala kely iray izay mampiseho ny orinasanao ivelan’ny aterineto). Raha tianao ha estat dia tsara ny requereix. No haureu estat, no heu utilitzat la joguina CMS de joguina i WordPress ianao, GoDaddy dia manana fepetra marobe ho anao. Mety tsy maintsy mandany fotoana be dia be mamaritra zavatra ao amin’ny CPpananao ianao. No hi ha hampiantrano o no WordPress tranonkala ianao dia requereix miraka amin’ny drafitra Hosted ho an’ny fampiantranoana WordPress host mitja hafa web host.
Ny valin’ny GoDaddy – 3 avy amin’ny 5.
No es fomba ifandronan’ny GoDaddy amin’ireo mpamatsy fampiantranoana hafa:
Xarxa GoDaddy vs Solika
Zava-dehibe: Ny fanamarihan’ny mpamoaka lahatsoratra ao amin’ny Saurabh’s GoDaddy Review
Fanamarihana avy amin’i Jerry: Nolazain’i Saurabh fa io fotoana io dia iray amin’ireo tombony GoDaddy saingy tsy nanaiky aho. Ny tranonkala midina indray requha isan-kerinandro dia tsy tsara. Raha oharina, iPage, íay ~ 50% mora kokoa, dia namoaka 100% tamin’ny martsa sy aprily 2015 (jereo ny antsipiriany). Ary, ny vidin’ny fampiantranoana GoDaddy fa tsy mora vidy rehefa mivory miaraka amin’ny hafa (nitombo ny vidiny hatramin’ny nisian’ny sonia Saurabh, no drafi-toekarena GoDaddy dia mitentina $ 4.99 / mo). Tsy miteny aho hoe tsy go Goadaddy. Saingy toa misy safidy hafa tsara kokoa. Raha sendra mitady ny fampiantranoana teti-bola ianao, azafady mba diniho ihany koa ny ahy Toro-làlana mora hitazonana eto.
Naverina niverina tao amin’ny 1997, GoDaddy no sehatra lehibe indrindra manerantany, miaraka amin’ny mpanjifa
Naverina niverina tao amin’ny 1997, GoDaddy heç bir sehrra lehibe indrindra manerantany, miaraka amin’ny
Blogunuzu WordPress.com-dan özünə məxsus bir domenə necə köçürmək olar
نصائح Venalicium enim 9 قابل للتنفيذ
Mediakits en borgskappe: Hoe u u blog aantreklik kan maak vir adverteerders
Ən yaxşı Hosting E-poçtunu tapın və İş E-poçtunuzu necə qurmağı öyrənin
Tips airson luchd-blogadh SMM: En ‘gabhail do mheadhanan sòisealta chun an ath’
I-WHSR Iingcebiso Zokubamba Zisebenza njani؟
Hoe om op te stel en te werk met WordPress Multisite Network
Satus Blogging: elaboració de plans denuo en Aenean
2020-ի լավագույն VPN ծառայությունները. Համեմատության մեջ գտնվող 10 լավագույն VPN- ները
آزمایش պահفی. من از شرکت های میزبانی 28-ը առաջարկում է ՝ چت زنده درخواست دادم
Bochum Weeb WeKachasịMma na 2020（Dabere na Real Data和ỌnọdụOjiji）
Kodi Wikipedia Sitikudziwe Chiyani veebimajutus
كيف بنى Tristan Hervouvet ImageRecycle من 0 إلى 1،000،000،000 صورة
15 WordPress Animaliak və Animaliak Gaiak
Si të presësh një faqe në internet: Udhëzues i plotë për fillestar
Не е вашият обикновен списък с 10 най-добрите хостинг доставчици
Halten Sie Ihre Leser mit Haken und Kleiderbügeln interessiert
Intee Ayuu Yahay websted Ku Deeqaa Qiimaha 2020?
Wikipedia Kodi i faqeve të Internetit Hosting
Venalicium Tips enim Aksiebare 9 effektiewe Pinterest
15 Veb üçün ən yaxşı nümunə təqdim edin
Iifayile ze-Facebook ze-17 Kwi-WordPress ինտեգրումը
نام دامنه برای Dummies: Shikoni për Blerje Një نام دامنه
Kuidas oma raamatut ise avaldada. Nr 1: Blogijate traditsiooniline vs iseenda kirjastamine
VPS راهنمای میزبانی: سرور خصوصی مجازی چگونه کار می کند؟
Ръководството за политика за поверителност (и бисквитките) за собствениците на уебсайтове
Kif Ibda博客成功，第2部分：Promozzjoni u Monetizzazzjoni
Hoe om geld as ‘n filiaal te verdien
İyun Yığıncağı: Mecha e Sechaba, Ho Ngola Hacks, Tlhahlobo ea botho
25 tehnopärijat (Iyo Sicirkooda Sare) Waa inaad ogaatid
Kodi Vikipediya Veb Hosting saytlarını təqdim edir